HETSIKA « TAGNAMARO » : Nifanome tanana nanadio ny mpitandro filaminana sy mpandraharahan’ny fonja
Ny sabotsy 30 marsa nandritra ny hetsika Tagnamaro, dia samy nanao hetsika fanadiovana faobe tao amin’ny toeram-piasany avy ireo mpitandro filaminana tao Toamasina sy ny mpandraharahan’ny fonja. 1er avril 2019
Ny alatsinainy 1 avrily teo kosa, dia nisy ny hetsika Tagnamaro mitambatra nanehoan’izy ireo fa olom-pirenena manana adidy amin’ny fahadiovan’ny tanànan’i Toamasina izy ireo.
Ny marainan’ny alatsinainy 1 avrily io, dia nisafidy nanadio ny araben’ny fahaleovantena hatreny amin’ny Hopitaly Be ny mpitandro filaminana sy ny mpandraharahan’ ny fonja tao an-drenivohitry ny foko Betsimisaraka.
Nanambara ny lehiben’izy ireo fa ezahina hitohy ny hetsika fa tsy hijanona eo. Izy ireo izay nankasitraka ny fitondram-panjakana tamin’ ny famoronana ilay hetsika Tagnamaro, andron’ny olom-pirenena. Ho an’ny zandary, dia manomboka anio 2 avrily ilay hetsika herinandron’ny fandriam-pahalemana ao Toamasina. Nilaza tsy hitsitsy amin’ireo jiolahy ny zandary. Hetsika izay mifanindra an-dalana amin’ny andron’ny zandarimariam-pirenena.
Ny Village touristique no nanehoana ny « Hetsika Tagnamaro » teto Mahajanga
Teny amin’ny Soma beach, Village touristique no nifampitaona ho an’ny andron’ny olom-pirenena ny teto Mahajanga. Maro dia maro ny nanoina ny antso, niara-nanadio ity fananana iombonana ity. Isaky ny sabotsy faran’ny volana no anaovana azy io. Sady fialamboly no fanadiovana, hoy ny depiote teo aloha Lalao Rahantanirina. Tazana teny ny sefo fokontany, lehiben’ny orinasa, mpiasam-panjakana, olon-tsotra, mpitandro filaminana notarihin’ny prefen’i Mahajanga.
Mbola manentana ny rehetra ny prefe handray anjara amin’ny hetsika fikojakojana sy fiarovana ny fananana iombonana, mba samy hahatsiaro tena ho tompony. Hanombohana ny fiovan’ny toetsaina izy io, hoy ny fanazavany. Fomba fisainana, fomba fijery no samy ovaina amin’izany. Fanombohana ihany ny natao ny sabotsy teo fa fifampitaizan’ny olom-pirenena, ifampitaizana, hambolena ny kolontsaina tompon’andraikitra sy fandraisana andraikitra. Samy manao any amin’ny misy azy any avy na toeram-ponenana , na toeram-piasana na toeram-pitsangantsanganana fa ny tanjona dia mba samy hikolokolo sy hikajy ireny fananana iombonana ireny.
Nandray anjara tamin’ny Hetsika koa ny mpitandro filaminana mpampandry tany any Tsaratanàna
Anisan’ireo nandray anjara tamin’ny hetsika Tagnamaro ao amin’ny distrikan’i Tsaratanàna ireo mpitandro filaminana nampandry tany any amin’izao fotoana izao. Ny lehiben’ny distrika no nitarika azy ireo nanadio ny lalana sy nanamboatra ny kianja filalaovam-baolin’ny mpianatra ao an-tampon-tanàna. Na polisy na zandary na miaramila dia samy nandray anjara daholo tamin’ity hetsiky ny olom-pirenena ity. Betsaka ihany koa ny skoto sy olon-tsotra nanatevin-daharana azy ireo.
Kamy sy Vanessa